Ikhithi yemidiya nomhlahlandlela webhrendi - BullyingCanada
24/7/365 Inethiwekhi Yokusekela
udinga ukwesekwa kwakho Ukwelapha Imiphakathi Ukukhanyisa Ukukhanya Enkingeni Ungasiza Ukumemezela izindaba ezithinta ukuxhashazwa kwentsha
isiza izingane zifune usizo futhi zizithole endleleni eya ekwelapheni.
BullyingCanada ibonga kakhulu imibuzo yezintatheli ngomsebenzi owenziwayo.
ukunika intsha ehlukunyezwayo ikusasa eliqhakazile
BullyingCanada Isindisa Izimpilo
BullyingCanada sekuyiminyaka engaphezu kweshumi nanhlanu isekela intsha ezweni lonke—isiza izisulu zokuxhashazwa ukuba zithole indlela yokwelapha ezisebenzelayo.
BullyingCanada inikeza uhlu lwamasevisi, futhi inikeza lawo masevisi ngokusekelwe ezidingweni zomuntu ngamunye. Wonke umuntu uphathwa njengomuntu oyedwa hhayi nje ifayela lecala. I-ethos igcwele yonke into BullyingCanada yenza ukuthi: ukunika intsha ehlukunyezwayo ikusasa eliqhakazile. Ingaphezu komugqa wethegi, yisizathu BullyingCanada ukhona.
Njalo Moment Ibala
Lapho ingane ixhashazwa isikhathi eside, maningi amathuba okuba ibe nezibazi ezingokomzimba, ezingokomzwelo nezingokwengqondo ezingahlala ukuphila kwakho konke. Ukuxhashazwa kungaba okulimazayo, kushiye izingane zikhululekile, zinamahloni, futhi zingalondekile.
Izingane zivame ukuphathwa yisisu, ikhanda elibuhlungu, ukushaywa uvalo, namaphupho amabi. Bangase bangakwazi ukulala—noma balale kakhulu. Bavamise ukungenzi kahle esikoleni ngenxa yokulahlekelwa ukugxilisa ingqondo nokuzethemba noma ukuya ngendlela engafanele njengoba bezama ukubalekela iziqhwaga. Uma kungayekethisi, ukuxhashazwa kungaholela izingane ukuba zizibulale. Ubuqhwaga bulimaza nababukele, abangase besabe ukuthi nabo bazohlukunyezwa.
Iziqhwaga ezifunda ukuthi zingakwazi ukubalekela ulaka nobudlova ngezinye izikhathi ziqhubekisela phambili lokhu kuziphatha zize zibe abantu abadala, zibe nethuba elikhulu lokuthi zingaba umnukubezi uma kungenjalo zihlanganyele esenzweni sobugebengu.
Lokhu kuyingxenye yokuthi kungani BullyingCanada idingeka kakhulu ukuze usize izingane ezixhashazwayo, ngokushesha ngangokunokwenzeka ngemva kokuqala kokuxhashazwa
I-OPP ithi ubuxhwanguxhwangu be-inthanethi buyanda ezikoleni zaseKenora
Ubuxhwanguxhwangu be-Cyberbully phakathi kwabafundi buyanda e-Kenora ngokusho kwe-Ontario Provincial Police. Incazelo ukuthi BullyingCanada inikeza ubuxhwanguxhwangu be-inthanethi isebenzisa i
Kusho Ukuthini Ukugubha Usuku Lwehembe Elibomvana
Iningi labantu baseCanada licabanga ngeHalifax, eNova Scotia, njengendawo enhle yokuhlala, nokuvakashela kuyo, kodwa isifundazwe sasolwandle kulapho futhi kuqashelwa khona uSuku Lwehembe Elibomvu.
Amaqiniso: Abafundi abangaphezu kwesigamu abathintwe ukuxhashazwa bakholelwa ukuthi iziqhwaga zabo zinamandla okuthonya lokho abanye abafundi ababekucabanga ngabo. Abafundi
Uhambo olugcwele lombuthano: Sethula i-Cloudflare Canada - Intelligent CIO North America
UMichelle Zatlyn, Co-founder, uMongameli kanye ne-COO e-Cloudflare, uchaza indlela inkampani eyandisa ngayo imisebenzi yayo yaseCanada, ukuthi inkampani isebenza kanjani namabhizinisi aseCanada futhi
Uhambo luphelile : isethulo se-Cloudflare Canada
Aujourd'hui, Cloudflare an annoncé que Toronto accueillera le premier bureau kanye ne-première équipe de Cloudflare noma Canada.
UHAMBO OLUGCWELE LWE-CIRELE: Sethula i-Cloudflare Canada
Namuhla i-Cloudflare imemezele ukuthi iToronto izoba yikhaya lehhovisi neqembu laseCanada lokuqala le-Cloudflare. Ngenkathi okwamanje ngihlala eSan Francisco, ngazalwa
Imibuzo? Udinga uhlobo lwefayela oluhlukile noma okuhlukile? Thinta Ihhovisi Lezokuxhumana nge-imeyili: [i-imeyili ivikelwe]
Faka isicelo sokugunyazwa ukuze usisebenzise BullyingCanada Ilogo noma Izimpawu Zokuhweba
BullyingCanada I-Maple Leaf Mark
Landa Ifayela Le-Zip (.pdf, .png, .svg)
Landa Ifayela Le-Zip (Greyscale; Mnyama; Mhlophe) (.pdf, .png, .svg)
Landa ifayela le-French Zip (.pdf, .png, .svg)
Landa Ifayela Le-French Zip (Greyscale; Mnyama; Mhlophe) (.pdf, .png, .svg)
BullyingCanada Ilogo engenawo umugqa wethegi
BullyingCanada Thumela umbhalo Maka
Landa Ifayela Lefonti
I-Canada Post Ivunyelwe
Enye Imeyili Eqondile